Kooxda ISIL oo gudaha Syria ku dishay ciidamo ka tirsan Milatariga Turkeyga – The Voice of Northeastern Kenya
Kooxda ISIL oo gudaha Syria ku dishay ciidamo ka tirsan Milatariga Turkeyga
3 askari oo ka tirsan ciidamada Milatariga dalka Turkeyga ee ku sugan gudaha dalka Syria ayaa lagu dilay gantaallo ay rideen xoogaga kooxda isku magacowday Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam.
War kasoo baxay taliska Milatariga Turkeyga ayaa lagu sheegay in gantaallada lala beegsaday 2 taangi oo ay ciidamadooda leeyihiin oo ku sugnaa meel u dhow magaalada al-Rai ee dalka Syria.
Warka ayaa markii hore lagu sheegay in ay 2 askari ku dhinteen weerarkaasi dhacay galinkii dambe ee shalay oo talaado ahayd, hase ahaatee goor dambe ayaa lasoo tabiyay in askari 3-aad uu u geeriyooday dhaawac soo gaaray.
Gantaallada ay riday kooxdaas oo magaceeda loo soo gaabiyo ISIL ama daacish ayaa waxa sidoo kale ku dhaawacmay 4 askari oo kale u dhashay Turkeyga.
Qasaarahaan soo gaaray ciidamada Turkeyga ayaa ah kii ugu horreeyay ee masuuliyadiisa lagu eedeeyo dagaalyahannada kooxdaasi oo sidoo kale loo yaqaanno ISIS.
Milatariga dalka Turkeyga ayaa dhawaan howlgallo ka dhan ah kooxda Daacish iyo xoogaga kurdiyiinta ka billaabay gudaha dhulka Syria, iyagoo hadda ku sugan deegaanno ku yaalla waqooyiga dalka Syria oo u dhow xadka ay labada dal wadaagaan.
Dhanka kale waxaa soo baxaya eedeymo loo jeedinayo dowladda Syria ee dagaalka kula jirta xoogaga mucaaradka ee ku sugan magaalada Aleppo.
Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha Syria ayaa sheegay in ciidanka dowladda uu hoggaamiyo Bishaar al aasad ay mar kale adeegsadeen suntan halista ah ee loo yaqaanno Chlorine-ta.
Ugu yaraan 1 qof ayaa ku dhintay halka in ka badan 100 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen 2 bambaano oo ay ku jirto kiimikadaasi oo mar qura lagu riday qeybaha ay Aleppo ka maamulaan dagaalyahannada mucaaradka.
Dowladda Syria ayaan wali wax jawaab ah ka soo saarin dhaleeceyntaasi cusub ee loo jeediyay.
Bishii la soo dhaafay ayey ahayd markii ay hay’adaha Qaramada Midoobay soo saareen war bixin ay ku muujinayaan cadeymo ku saabsana in dowladda Syria ay dagaalka u adeegsato Kiimikooyinka mamnuuca ka ah in loo isticmaalo dadka.
← Madaxda maamul goboleedyada oo sheegay in ay maxkamad la tiigsan doonaan xil ka qaadistii barasaabka Nyeri
Booliska oo qabtay nin haweeney meydkeeda ku ridaya wabiga Nairobi →